Kumiswa Clamp Vagadziri, Vatengesi - China Kumiswa Clamp Factory
Rudzi rweBhegi (CGH)
Rudzi rweBhegi (XG)
Ground Kaviri Hanging Point Yakakombama (XT)
Aluminium inosunga mboniPA-1500-2000
Bolt Rudzi (NLL)
Bhaudhi Rudzi (NLD)
Hydraulic Rudzi (NY)
NXJG (Wedge Rudzi)
Kuvhara kwekuvhara uye NXL-NXLJ
Dhonza tsvimbo yerudzi （NXJ）
Wedge mhando （NJJ）
Yoke Plate L Rudzi
Torque Zviteshi (BLMT Series)
Dzakafanana Groove Clamp (JB-JBL-JBT-JBTL)
Kubaya Clamp (JJC-JJCD)
Aluminium inonamira clampPA ...
Nhanganyaya Makakatanwa kiramba inoshandiswa kukona, kubatana, uye chinongedzo conne ...
Batanidza yakakodzera kubatanidza insulator uye fittings pane Ultra voltage kutapurirana ...
Kuomesa kiramba NLD-1
Strain kiramba, bhaudhi mhando, NLD dzakateedzana bhaudhi mhando kunetsekana zvisungo zvinonyanya kushandiswa ...
kuturika kiramba XT 4022
Ground kaviri yakarembera poindi pre-yakamonyaniswa kuturika kiramba Iyo Clamp muviri uye k ...
Kumiswa kusungisa kwemapatya jumper makondakita
Catalog No. Inoshanda yewaya dhayamita Main zviyero, mm, Yakatemwa kutadza kutakura, KN, Kurema, kg, L1 L2 CR h, M XTS-1 18 ~ 24 200 50 19 13 57 18 16 70 4.5 XTS-2 25 ~ 31 200 56 19 16 62 18 16 70 5.0 XTS-2A 17 ~ 21 200 50 19 11 57 18 16 70 4.5 XTS-2B 21 ~ 27 200 52 19 14 59 18 16 70 5.0 XTS-5 23 ~ 33 200 60 20 17 55 18 18 100 4.2 XTS-6 34 ~ 45 ...
Kumiswa kiramba J-haka mhando
Iyo yekumisa kirampiki yakagadzirirwa kumisikidza uye kuturika tambo ina yepamoyo yekuzvitsigira-yavo LV-ABC tambo kumatanda kana madziro. • Chinosungirwa chakagadzirwa nesimbi inopisa-yakanyorova uye inodzivirira mamiriro ekunze. • Yakagadzirirwa shear musoro bhaudhi. Iyo clamp inogona kuiswa nyore nyore pasina kukuvara kune iyo waya yekuvhara * • Hapana yakasununguka zvikamu • Standard: EN 50483-2 Catalog No. Yakakodzera conductor JSC-1 4 × 16 ~ 35mm2 JSC-2 4 × 50 ~ 120mm2 JSC-3 4 × 50 ~ 70mm2 ...
kuturika okusungisa kweABC tambo
XJG nhepfenyuro inokodzera yemuchadenga yemagetsi waya kuturika kuputira conductor, inopa Hook mhando, hinge mhando uye ekisipoti mhando yevashandisi.
NYLON-kuturika-kiramba yeABC tambo
1A 1B kuturika kiramba yakagadzirirwa kumisa pachezvayo inotsigira LV-ABC tambo pane matanda neyakavharidzirwa nharaunda mutumwa. Tiri kutungamira mukugadzira weNFC Type Suspension Clamp uye maitiro ekugadzira jekiseni kuumbwa, zvinhu zvinoshandiswa iUV Resistant Glass Girazi Rakazara Nylon, zvinobatsira icho chigadzirwa chine icho nekuti chakagadzirwa chepurasitiki chakazara Insulated uyezve haina chero yakasununguka zvikamu. , tambo inogona kubatwa nekugadzirisa kwepush mhando lever. Taura ...
Suspension kiramba (trunnion mhando)
XGU dzakateedzana trunnion mhando inochinjika simbi yekumisa kiramba / yemagetsi pole kiramba inonyanya kushandiswa kumusoro wemagetsi mutsetse, kumbomisa conductor pane insulator kana mheni conductor pane mwenje shongwe kuburikidza nekubatanidza fittings. Iyo inoumbwa nealuminium alloy, iine minium kurasikirwa kwemagineti hysteresis & eddy yazvino pamwe nehuremu uremu & nyore kuiswa. Yakawana kune iyo nzira yekuchengetedza-simba & kuderedzwa kwekushandisa kweChinese nyika grid yekuvakazve. Kana ...
Ground yakapetwa kaviri poindi yakatenderedzwa yakamonyaniswa yekumisa kiramba Iyo Clamp muviri uye vachengeti vakagadzirwa nealuminium alloy Iyo Cotter-mapini akagadzirwa nesimbi isina simbi, Iwo mamwe mativi anopisa-dip kwakakurudzira. (1) Iyo yakanyanyisa Angle yeiyo yekumisa kiramba haisi pasi pe25 °. (2) Iyo nharaunda yekukombama kweiyo yakanyanyisa waya clip haifanire kunge iri pasi pe8 nguva dzehupamhi hwetambo yakaiswa. (3) Simba rinobata rekumisa waya clip pane dzakasiyana waya uye muzana yeakayerwa te ...
kuturika kiramba XG 4022
Kuturika kiramba, bhegi mhando, Iyo yekumisikidza waya clip inowanzo shandiswa pamusoro wedenga magetsi tambo kana zvinotsiva. Iyo waya nemheni conductor zvakasungirirwa patambo yekuvhara kana iyo mheni conductor yakamiswa padanda reshongwe nekubatanidza iyo simbi fittings.Iyo inogadzirwa nemhando mbiri dzezvinhu: simbi nealuminium alloy. Yakarembera Angle yeiyo yekumisa waya clip icha isingave isingasviki makumi maviri neshanu, uye iyo nharaunda yekukomberedza haifanirwe kunge iri pasi peakadiya masere ehupamhi hweiyo inst ...
kuturika kiramba CGH
Kumiswa Clamp （Envolope mhando） XGH akateedzana masisitisi ekumisa anoshandiswa kubatanidza ma conductor kune insulators. Mutumbi weClamp uye vachengeti vakagadzirwa nealuminium alloy Iyo Cotter-mapini akagadzirwa nesimbi isina simbi, Iwo mamwe mativi anopisa-dip kwakakurudzira. Catalog No. Yakakodzera Kondakita Dia.） Mm） Yakakura zviyero (mm) Yakatemwa Kutadza kutakura (kN) Kurema (kg) HCMRL XGHICGH) -2 5.1-12.5 52.5 25 16 18.0 166 40 1.0 XGHICGH) -3 12.4-17 50 .. .
2021 Honda CRF300L uye CRF300L American Rally yakaziviswa